15 Best Books of the Decade | 2022 List | Kiiky Wealth
Bogga ugu weyn 15 Kutub ee ugu Wanaagsan Tobankii | 2022 Liiska
Tobankii sanoba waxay leeyihiin buugaagteeda ugu fiican. Waad ogtahay waxa aan ka hadlayo, buugaagtaas oo ka soo muuqanaya samaynta aragti waarta. Tan iyo markii la daabacay sheekada koowaad sano ka hor 1000, waxaa jiray buugaag aad u badan oo la qoray tobankii sanoba mar.
Sida dhammaan akhristayaasha xiisaha lihi og yihiin, waxaa jira buugaag aad u badan iyo waqti aad u yar. Haddii aad rabto inaad akhrido buugaagta ugu fiican, markaa waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso buugaagta ugu fiican tobankii sanoba mar. Tobaneeyo sano ayaa bixiya buugaag badan oo abid la qoray.
Ka fikir 1960kii. Kacdoonkii bulsheed iyo iska-caabbinta xaaladda taagan waxay horseeday qorista To Kill a Mockingbird oo uu qoray Harper Lee, Kurt Vonnegut's Slaughterhouse-Five, Ariel oo uu qoray Sylvia Plath, iyo taariikh-nololeedka Malcolm X (in yar uun la magacaabo).
Waxaan ka heli karnaa dareenka tobanka sano waxa sheekooyinka la qoray iyo waxa dadku u arkaan inay yihiin buugaagta ugu wanaagsan tobankaas sano. Taasina waa waxa maqaalkani tixgelin doono.
Maxay yihiin 10ka buug ee ugu fiican ama sheekooyinka mar walba?
Waxaa jira xulashooyin badan oo laga dooran karo liisaska shaandhaynta iyadoo loo eegayo sheekooyinka, khiyaaliga, ama noocyada kale. Kadibna waxaan ku darnaa dhadhanka gaarka ah ee akhristayaasha! Ma aha qof kasta inuu aad ugu faraxsan yahay akhrinta Shakespeare sida tan xigta.
Buugaagta ugu fiican abid waa liis laga doodi karo si aan dhammaad lahayn. Buugga oo loo caleemo saaray sida ugu fiican ayaa badanaa ah mid xiiso u leh akhristaha laftiisa. Si kastaba ha ahaatee, waxaan isku dayi doonnaa inaan noqonno kuwo ujeedo leh intii suurtagal ah. Liiskan waxaa la soo uruuriyay iyadoo la adeegsanayo algorithm si loogu dhejiyo gelitaannada 130 liis "buugaagta ugu fiican" waana meel ku habboon in la fiiriyo haddii aad rabto inaad tixgeliso su'aalaha miisaanka leh ee buugga ugu wanaagsan abid.
Waxaan ku qori doonaa qaybta dambe.
Maxay yihiin buugaagta ugu fiican tobankii sano ee la soo dhaafay?
Halkii la weydiin lahaa su’aalaha taariikhda ama dhammaan buugaagta ugu wanaagsan ee abid la daabacay, waxay noqon kartaa mid aad u xiiso badan in la tixgeliyo buugaagta ugu wanaagsan tobankii sano ee aan hadda ku jirno.
Haddii buugaagtu ay ka tarjumayaan cidda aan nahay iyo sheekooyinka aan sheegno, waa maxay dib u milicsiga degdegga ah ee buugaagta ugu wanaagsan tobankii sano ee la soo dhaafay? 1000 sano oo mustaqbalka ah, marka ay dib u eegaan sanadihii 2012 ilaa 2022 iyo buugaagtii aan qiimeynay, maxay taasi inaga dhihi doontaa?
Mar labaad, waxaan si gooni ah u tixgelin karnaa noocyada kala duwan, falsafad ahaanna waxaan tixgelinnaa waxa ka dhigaya buugaagta ugu fiican kuwa ugu wanaagsan tobanka sano. Laakiin buugaagta, tobankii sano ee la qorayba, ayaa ugu horrayn ku saabsan akhrinta.
XIDHIIDHKA: Maxay tahay in Miisaaniyadayda Xaashida Xaashidu ku jirto? Muunado & Template
Liiskan buugaagta ugu fiican tobankii sano ayaa la daabacay intii u dhaxaysay 2012 iyo 2022. Waxaan ka fiirsanaynaa ma aha oo kaliya saamaynta ama muhiimada buugga ama sheekada laakiin sidoo kale akhriska. Mararka qaarkood waxaad rabtaa inaad akhrido buug wanaagsan!
Akhri: 15 Meelaha Ugu Fiican ee Lagu Iibiyo Buugaagta Casharrada 2022 | Khadka Tooska ah & Khadka Tooska ah
15-ka buug ee ugu wanaagsan tobanka sano
1. Amerikaanah waxaa qoray Chimamanda Ngozi Adichie (2013):
Kani waa sheeko aan iin lahayn oo ku saabsan Ifemelu oo ka tagta Nigeria si ay ugu noolaato Ameerika. Waxay ku qasban tahay inay dhex mushaaxdo waxa ay ka dhigan tahay inay Afrikaan tahay Mareykanka.
Buuggan wuxuu ku guuleystay abaalmarino kala duwan wuxuuna u qalmaa booskiisa inuu yahay buuggii ugu wanaagsanaa tobanka sano.
Adichie wuxuu sheekada u qoraa qaab qabta deg -degga iyo wadne xanuunka ee ah inaad ka hesho waddan cusub iyo dhererka uu qofku dareemo inuu leeyahay lahaansho ka fog guriga.
2. Nolol yar waxaa qoray Hanya Yanagihara (2015):
Nolol yar waa wax lala yaabo, loolan, murugo, iyo si qoto dheer u dhaqaaqa. In kasta oo ay tahay inay la timaaddo digniin kicisa, sheekadan hal -abuurka ahi waxay daba socotaa afar saaxiibbo oo kulleej ah markay u socdaan adduunka iyagoo u guuraya New York.
Markuu waqtigu sii dhaafo saaxiibtinimadooda ayaa sii kordheysa, Yanagihara wuxuu si wax ku ool ah u dhex maraa akhristaha iyada oo la marayo qaar ka mid ah daqiiqadihii ugu madoobaa ee lagu soo bandhigay sheekooyin leh naxariis iyo dhab ahaansho.
Kani waa buuggii labaad ee ugu wanaagsanaa tobankii sano ee la soo dhaafay.
3. Dahabka dahabiga ah waxaa qoray Donna Tartt (2013):
13-sano jir Theo Decker ayaa si mucjiso ah uga badbaaday qarax hooyadii ku dhintay isagoo booqanaya Matxafka Farshaxanka ee Metropolitan si uu u arko bandhig ay ku jiraan Carel Fabritius Dahabka dahabiga ah.
Tartt wuxuu dabagal ku sameeyaa horumarka Theo iyo sida uu uga mid noqonayo dhulka hoostiisa ee aruurinta farshaxanka.
Dahabka dahabiga ah waa buug aad u qosol badan oo aad doonayso inaad qof walba uga sheegto. In kasta oo buugaagtan qarniga ugu wanaagsan si muran ku jiro loo helay, haddana waa buug aad u wanaagsan in la akhriyo.
4. Dareenka Dhammaadka Waxaa qoray Julian Barnes (2011):
Barnes wuxuu soo bandhigayaa wax qarsoon oo ku qasan kakanaanta maskaxda iyo shucuurta.
Tony Webster waa nin dhawr iyo lixdan jir ah oo ay tahay inuu ku laabto xusuustiisii ​​labaatameeyadii hore oo uu dib u qiimeeyo sida uu naftiisa u xusuusto iyo sidoo kale dadka kale ee noloshiisa.
Waa sidee xusuustaas hal dhinac ah? Oo maxay tani uga dhigan tahay noloshii uu ku noolaa?
Waxaas oo dhan waad fahmi doontaa markaad akhrido buugaagtan ugu wanaagsan tobankii/qarnigii.
5. Buugaagta Neapolitan Waxaa qoray Elena Ferrante (2012–15):
Sheekadan oo ku jirta afar buugaag waxay socotaa 50 sano waxayna raacdaa qalloocyada iyo saaxiibtinimada Elena iyo Lila. Buuggani wuxuu ka warramayaa sheeko saaxiibtinimo oo run ah oo sahaminaysa isbeddelka xaafaddooda, magaaladooda, iyo waddankooda inta ay nool yihiin.
XIDHIIDHKA: Waa immisa celceliska makaanigu sameeyo?
Buugaagtan qarniga ugu fiican waa in la akhriyo.
6. In ka yar Waxaa qoray Andrew Sean Greer (2017):
Musiibadan naxdinta leh waxay daba socotaa safarkii Arthur, oo ahaa qoraa wax ka qabtay xiisad jirta.
Isagoo ka xumaaday xusuusta xiriirada uu la yeeshay, wuxuu la kulmaa saaxiibo hore iyo kuwo cusub intii uu ku guda jiray socdaalkiisa daafaha dunida, mar walbana wuxuu la halgamayay su’aal taagan oo ah inuu waligiis fiicnaan doono.
7. gadooday waxaa qoray Ling Ma (2018):
gadooday wuxuu sahamiyaa mowduucyada nostalgia, dhaqanka xafiiska casriga ah, hal -adayga, iyo cilaaqaadka dhow ee ka dhanka ah aafada faafa ee sababa apocalypse zombie.
Ling Ma oo aad u qallafsan oo sardonic leh, Ling Ma wuxuu wax ku qoraa isagoo leh dareen miyir -qab oo ay adag tahay in la jabiyo.
Kani waa mid kale oo ku jira kaydadkeena buugaagta ugu wanaagsan tobankii sano.
Sidoo kale akhri: Buugaagta Is-Caawinta Bilaashka ah ee Kobcinta Ganacsigaaga | 2022
8. Hees, Lama aasin, Hees waxaa qoray Jesmyn Ward (2017):
Buugani wuxuu la halgamayaa runta udub dhexaadka u ah sheekada Ameerika iyo sidoo kale awoodda iyo xaddidaadaha laga helo fikradda qoyska.
Ward wuxuu si khibrad leh u sawiraa safar iyada oo loo marayo Mississippi taariikhdii hore iyo tan hadda jirta oo labaduba ah sawir qoto dheer oo qoys iyo aragti fog oo bulshada dhexdeeda ah.
Si aad u qumman ayaa loo qoray, buuggani wuu ku dhaqaajin doonaa oo kula joogi doonaa muddo dheer ka dib markaad dhammayso.
9. Dadka caadiga ah waxaa qoray Sally Rooney (2018):
Tani waa sheeko jaceyl. Qiso jaceyl oo ku saabsan laba qof oo aan loo ogoleyn inay is jeclaadaan
In kasta oo tani ay u muuqato mid aad u qallafsan, Rooney waxay u keentaa dareen maskaxeed xiriirka ay ku sahamiso khiyaanooyinka fasalka ee bulshada casriga ah iyo sidoo kale cakiranaanta isku -dhafka jacaylka ee raadkooda ku reeba cidda aan nahay.
I aamin, tani waa akhrin mudan oo laga soo qaatay tiirarka buugaagta ugu wanaagsan tobankii/qarnigii.
10. Ka bax Galbeedka waxaa qoray Mohsin Hamid (2017):
Sheeko wadne-xannuun leh, buuggani wuxuu daba socdaa Nadia iyo Siciid oo ka soo tallaabaya albaab sixir ah, oo ka soo baxaya mustaqbal shisheeye oo aan la hubin oo ka yimid magaalo ay rabshado ka dilaaceen.
Si aad u qoto dheer oo awood leh oo hal -abuur leh, buugani wuxuu sheegayaa sheeko lama ilaawaan ah oo jacayl, daacadnimo, iyo geesinimo leh.
11. Gabar, Naag, Mid kale Waxaa qoray Bernardine Evaristo (2019):
Buuggani wuxuu daba socdaa noloshii iyo halgankii laba iyo toban jilaa oo aad u kala duwan. In kasta oo ay jiraan waxyaabo ay ka siman yihiin, haddana aad bay uga duwan yihiin midba midka kale.
XIDHIIDHKA: 10ka Bedelka ugu Fiican Caffeine
Evaristo waxay noloshooda ku raadisaa garashada iyo naxariista, iyadoo ku tolaysa shabakad haween ah oo midba midka kale u kala gooyo siyaabo muujinaya kartida farsamadeeda.
12. Sellout-kii Waxaa qoray Paul Beatty (2015):
Sheeko qaniinyo leh oo ku saabsan barbaarinta go'doonsan ee nin dhallinyaro ah iyo tijaabada jinsiyadda ee u dirta Maxkamadda Sare, buugani wuxuu soo bandhigayaa garaadka majaajilada ah ee Beatty.
Waxay caqabad ku tahay caadi ahaanshaha nolosha magaalooyinka, dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga, xiriirka aabaha iyo wiilka iyo sidoo kale fikradaha nidaamyada sharciga ee caddaaladda.
Adigoo ah magaca tobankaan buug ee ugu fiican, waa baaluq ay tahay inaad akhrido.
13. NW: Buug cusub waxaa qoray Zadie Smith (2012):
NW wuxuu raacayaa afar reer London ah iyagoo isku dayaya inay dejiyaan noloshooda qaangaarka meel ka baxsan dhismaha golaha ee carruurnimadooda. Riwaayad aad u qoto dheer oo reer magaal ah, waxaa jira xaqiiqo ba'an oo buuggan lagu qabtay.
Qof kasta oo ku nool ama raba inuu ku noolaado magaalo waa inuu akhriyaa tan.
14. Boqortooyo Qarsoon waxaa qoray Yaa Gyasi (2020):
Awood badan, ceyriin ah, saaxiib ah, kani waa sheeko cusub oo ku saabsan qoys reer Ghana ah oo u soo haajiray Alabama.
Qoysku wuxuu la halgamayaa niyad -jabka, balwadda, iyo murugada gurigooda cusub. Tani waa sheeko ku saabsan iimaanka, sayniska, diinta, jacaylka, iyo lahaanshaha Sheeko labada caadifad leh oo aad u qoran.
Adigoo ah qof jecel sayniska wax walba, akhri tan iibiyaha ugu fiican oo ka mid ah buugaagta ugu wanaagsan qarniga.
15. Qeybtii La Lumay Waxaa qoray Brit Bennett (2020):
Iyada oo diiradda la saarayo mataano isku mid ah oo kala maqan oo ku nool nolol aad u kala duwan, Bennett wuxuu isku xiraa sheekooyin iyo jiilal badan oo qoyskooda ah oo ka soo guuraya Deep South una guuraya California.
Si isku mid ah ayaa loo cabiraa sheekada qoyska iyo sheekada taariikhda Mareykanka.
Ugu dambayn, kani waa buuggii ugu dambeeyay ee ku jira liiskayaga buugaagta ugu wanaagsan tobankii sano.
Akhri: 9 Kitaab ee Ugu Awooda Badan Si Aad U Badasho Aragtidaada Nolosha
15kaas buug ee ugu wanaagsan tobankii sano/qarnigii laga soo bilaabo 2012 ilaa 2022 waa kuwo dhalaalaya, dhaqaaqaya, loolan leh, iyo soo jiidasho leh.
Maxay naga tusaan inta aan nool nahay tobankan sano? Waxay muujinayaan inaan ka sheekeyn karno sheekooyin cusub oo weli ka tarjumaya aadanaha iyo tan ugu muhiimsan, wadajirka.
17 Siyood Oo Lagugu Bixiyo Jimicsiga Ama Jimicsiga Gurigaaga
Xigasho 41 Ku Saabsan In La Helo Nabadda Gudaha ee Maanka
Safarka nolol dhaanta leh wuxuu ka bilaabmaa iyadoo la gelinayo xoogaa dadaallo miyir leh waxa loo baahan yahay. Iyo, sida ugu badan…
10ka Cayaarood ee ugu Qaalisan Steam | 2022
Ciyaarta ciyaaraha waa wax aad u xiiso badan. Si kastaba ha noqotee, marka aad hesho deegaan aad ku abuuri karto, ku ciyaari karto,…
40 Xigashooyin Motivational Ku Saabsan Inaadan Marmarsiiyo Siinin
Weligaa ma ku qabataa in aad cudurdaar samayso marka arrimuhu u qabsoomi waayaan sidii aad filaysay? Ma leedahay…